Ngwa ntule kacha mma iji merie na ọdọ mmiri | Androidsis
Anyị niile ga -achọ ka ọ bụrụ na ọ gwaghị lọtrị, oge ochie ma ọ bụ ọbụna ọdọ mmiri ọbụlagodi na ọ bụ nke a na -enye onyinye kacha nta. Ọ bụrụ ike gwụrụ gị ịkụ nzọ na ọdọ mmiri kwa izu wee nweta nsonaazụ ole na ole, Ọ bụ oge ịgbanwe ụzọ.
Na Storelọ Ahịa Play, anyị nwere ngwa dị iche iche ha ga -enyere anyị aka mgbe anyị na -etinye nzọ anyị. Mana na mgbakwunye, ụfọdụ na -ekwe ka anyị jiri ekwentị anyị mee ha, na -ahapụghị ụlọ, yana ịnakọta ihe nrite ma ọ bụrụ na anyị nwere ihu ọma inye ya.
Ọnụ ọgụgụ ngwa ga -enyere anyị aka ime ọdọ mmiri kwa izu na ụlọ ahịa Google dị oke elu. Agbanyeghị, ụfọdụ n'ime ha na -ebu ihe karịrị otu afọ na -enweghị mmelite, yabụ achufuru m ha na listi a ozugbo.
Lee, anyị gosiri gị ngwa Android kacha mma na weebụsaịtị iji mee ọdọ mmiri site na atụmatụ, ngwa emelitere na 2021 niile, yabụ onye nrụpụta ahapụbeghị ha ma nye data emelitere oge niile.
1.1 Ihe Quinidroid na -enye anyị
2 Ọdọ mmiri
2.1 Ihe Quiniela na -enye anyị
3 Lọtrị gị
4 El Quinielista (weebụ)
5 EduardoLosilla.es (weebụ)
N'ihe karịrị nbudata 100.000 na nkezi akara kpakpando 4,6 n'ime 5 enwere ike anyị na -ahụ Quinidroid, ngwa abụghị naanị na -enye anyị ohere ịlele nsonaazụ ọdọ mmiri, kamakwa ịmepụta ha ekele maka amụma amụma nke ọ naghị enye ohere.
Ihe Quinidroid na -enye anyị
Jikwaa ụdị ọdọ mmiri niile, ndị dị mfe, ọbụlagodi ndị belatara site na ndị nwere ọnọdụ na ọtụtụ.
Nleba anya na egwuregwu nke ụbọchị, nke na -enye anyị ohere ịlele ihe ịga nke ọma na ọdịda nke nzọ anyị.
Lelee ụbọchị, oge na ọwa na -agbasa egwuregwu na -esote ụbọchị.
Ịma ọkwa nwere ihe mgbaru ọsọ yana nsonaazụ ikpeazụ nke egwuregwu.
Ọ na -enye anyị ohere ibu amụma nke egwuregwu ụbọchị.
Ngụkọta oge nke ihe nrite anyị na -enweta dị ka ihe ịga nke ọma si dị.
Ọ na -enye anyị ohere mbupụ na mbubata ọdọ mmiri yana ịkekọrịta ya na ndị enyi anyị.
O nwere ngalaba iji jikwaa klọb ndị enyi na ndị na -akwado ya.
Gụnyere isiokwu dị iche iche iji hazie ngwa ahụ.
Ọ na -egosi anyị nhazi ọkwa nke ndị otu nke mbụ na nke abụọ, Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ...
Site na ngwa anyị nwere ike soro nzo, anyị enweghị ike ịkụ nzọ. Quinidroid dị maka nbudata, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ngwa.
Ngwa Quiniela nwere ihe karịrị nbudata 500.000 na Storelọ Ahịa Play yana faịlụ Nkezi ọkwa nke kpakpando 4.3 n'ime 5 ga-ekwe omume. Emelitere ikpeazụ ya na Septemba 2021 (ebipụtara edemede a na Ọktoba 2021).
Site na ngwa a, anyị nwere ike lelee nsonaazụ ọdọ mmiri ndị ahụ, ebe ọ na -enye anyị ohere ịgbaso egwuregwu nke mbụ, nke abụọ, nke abụọ B na nkewa nke atọ nke Spanish (na mgbakwunye na ọgbakọ ndị ọzọ).
Ihe Quiniela na -enye anyị
Ịma ọkwa ndụ nke ebumnuche na ngwụcha egwuregwu yana nsonaazụ ya.
Lelee ọganiihu nke ọdọ mmiri ndị anyị banyere na ngwa.
Ọ na -enye anyị ohere ịkekọrịta ọdọ mmiri site na ngwa izi ozi.
Anyị nwere ike ibubata faịlụ kọlụm
Ọ na -enye anyị amụma nke puru omume nke egwuregwu ọ bụla.
Ozi ebe egwuregwu ọ bụla na -agbasa.
Ọ dakọtara na obere ọdọ mmiri.
Quiniela, dị ka Quinidroid, na -enye anyị ohere soro nzo anyị mana etinyeghị ha site na ngwa. Ngwa a dị maka nbudata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ngwa.
Karịa ngwa iji mata nsogbu nke egwuregwu izu ọ bụla, TuLotero bụ ngwa nke nna -enye gị ohere itinye nzọ na Quiniela na nkasi obi site n'ụlọ anyị, na -enweghị kwụ n'ahịrị na nchịkwa lọtrị ...
Na mgbakwunye, ọ na-enyekwa anyị ohere nakọta ihe nrite ozugbo site na ngwa ahụ, yabụ na ọ dịghị mkpa ịkwaga ka ị gaa n'ihu ịkụ nzọ na nkasi obi na Quiniela, Bonoloto, Euromillions, Primitiva ...
TuLotero dị maka nbudata kpamkpam n'efu, gụnyere ịzụrụ n'ime ngwa ahụ ka ị nwee ike tinye nzọ yana yana nbudata ihe karịrị 500.000 ọ nwere. Nkezi ọkwa nke kpakpando 4.8 n'ime 5 ga-ekwe omume.
TuLotero Zụrụ Lọtrị n'ịntanetị
El Quinielista (weebụ)
Ngwa dị na Storelọ Ahịa Play nke na -enye anyị ohere ịmata amụma nke egwuregwu Quiniela ha pere mpeN'ezie, anyị ga -achọta ngwa abụọ m kpọtụrụ aha n'isiokwu a, na -eburu n'uche ndị emelitere n'oge na -adịbeghị anya.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịma amụma nke otu egwuregwu anyị nwere ike ịga na webụ Ndị Quinielista. Ozugbo anyị banyere na webụsaịtị a, anyị ga -ahụ ọdọ mmiri ebe atụmatụ nke puru omume nke nsonaazụ nke egwuregwu nke ụbọchị na -esote.
Egwuregwu ọ bụla na -egosi pasentị atọ agbapụtara site na agba:
Azul karịa ohere iji merie
Rojo na -egosi nsonaazụ nke abụọ nwere ike pụta
Verde na -egosi nsonaazụ kacha nta.
Na mgbakwunye, na ala, ọ na -enye anyị atụmatụ ihe anyị nwere ike irite dabere na ọnụọgụ akụ anyị na -enweta, dabere na data nnakọta na jackpot nke ụbọchị ọ bụla, data anyị ga -eji aka tinye.
Ebe nrụọrụ weebụ ọzọ na -atọ ụtọ nke anyị kwesịrị ilele bụ EduardoLosilla, ozugbo ebe anyị nwere ike ịnweta amụma nke egwuregwu a ga -eme n'oge ngwụsị izu. Weebụsaịtị a na -ebu amụma ya na mpempe ozi 4:
Pasentị gbara na quinielista.
Pasentụ ndị egwuregwu na LAE.
Pasentị nke puru omume n'ezie.
Ọkara nka na ụzụ.
Ke adianade do, ọ na-enye a nyocha nke ọnọdụ otu abụọ a, dịka ha nọ na nhazi ọkwa, ndị egwuregwu merụrụ ahụ, egwuregwu ikpeazụ, ndị egwuregwu dị ...
Ọ na-enyekwa anyị ohere nweta nhazi tebụl, ebe anyị nwere ike ịhụ isi ihe, egwuregwu ọkpụkpọ, egwuregwu meriri na nke furu efu, ihe mgbaru ọsọ maka na megide ...
Site na weebụ anyị nwekwara ike nzọ ozugbo na -enweghị ịhapụ ụlọ. Ọ bụrụ na ị nwere klọb ndị na -akwado ya, ị nwere ike iji webụsaịtị a tinye nzọ gị ngwa ngwa, dị mfe na karịa ụzọ niile dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa atụmatụ kachasị mma iji merie na ọdọ mmiri
Usoro aghụghọ 6 kachasị mma maka Gardenscapes na gam akporo